Ikhitshi kunye nokutya
Ibhodi yetshizi kunye neSeti yemela
IJiujiang Cosen Industrial Co., Ltd., esekwe ngo-2008, ngumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi ngaphandle oxhalabele ukuyilwa, uphuhliso kunye nokuveliswa kwesileyiti, ibhastile kunye nezinto zasekhaya ezenziwe ngamaplanga. SikwisiXeko saseLushan, kwiPhondo laseJiangxi apho oovimba besileyiti babekwa kwindawo yokuqala eTshayina, kunye nesithuthi esifanelekileyo sokuya eJiujiang, eNingbo naseShanghai.
Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo engama-23,000 ㎡, unabasebenzi abangaphezu kwe-180 kunye namakhulu eendawo ezixhotyiswe kakuhle. Siluphumelele uphicotho lwe-BSCI minyaka le. Zonke iimveliso zethu zifanelekile nge-LFGB kunye nezatifikethi ze-FDA. Ulawulo lwethu olubalaseleyo lomgangatho kuzo zonke izigaba zemveliso kusenza siqinisekise ukwaneliseka okupheleleyo kwabathengi.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, siye sathumela eJamani, e-UK, eFransi, eItali, eMelika, e-Australia, eJapan nakwamanye amazwe angama-40 kunye nemimandla. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane beshishini obuyimpumelelo kunye nabathengi abanokubakho.
Ipaki yoShishino, isiXeko saseLushan, eJiujiang, eJiangxi, eTshayina